China Mining Rock ore egweri Ball Mill Powder egweri Machine factory na suppliers | Rigo
Mining Rock ore egweri Ball Mill Powder egweri Machine
Ngwurugwu bọọlụ dabara adaba na ntụ ntụ na-ete ụdị ọla ọ bụla na ihe ndị ọzọ, a na-eji igwe ihe eji eme ihe n'ọtụtụ ebe na mgbakwasa, ọrụ, ihe ụlọ na ụlọ ọrụ kemịkalụ na ihe ndị ọzọ. E kewara ya uzo abuo - uzo akọrọ na mmiri .E nwere uzo abuo abuo, udiri udiri ya na uzo di iche iche site na uzo di iche iche nke ihapu ihe. Bọọlụ igwe bọọlụ bụ akụrụngwa igodo iji gwerie ihe ndị e gwepịara egwepịa mgbe ihe ahụ gbajiri, ma na-ebugharị ọzọ. na bọl na nkume igwe nri na ọtụtụ-eji ntụ ntụ na-eme mmepụta akara tinyere ciment, silicate, ọhụrụ-ụdị ụlọ ihe onwunwe, refractory ihe onwunwe, fatịlaịza, ore mgbakwasa nke ferrous metal na-abụghị ferrous metal, iko ceramik, wdg, na bọl na-eburu na-eburu ụdị akọrọ ma ọ bụ ntụ ntụ mmiri na ụdị ọla ọ bụla na ihe ndị ọzọ na-egweri ihe.
Mkpụrụ obi bọọlụ bụ ihe dị mkpa maka ịgbanye. A na-eji ya eme ihe maka ciment, ngwaahịa silicate, ụdị ụlọ ọhụrụ, ihe ọkụ ọkụ, fatịlaịza kemịkal, ọla ojii na nke na-abụghị ferrous, iko, seramiiki na ndị ọzọ. gweriri ya site na mmiri mmiri ma ọ bụ site na usoro akọrọ.
Ngwurugwu bọọlụ kwesịrị ekwesị maka nnweta na ịgha ọka ash, nkume nzu, quartz ájá, ntụ ntụ aluminom, kol ntụ ntụ, slag nchara, ore, potassium feldspar, iron iron, iron slag, aluminum slag, silicon carbide, alumina, coal gangue na ihe ndi ozo.
Akụkụ bụ isi nke igwe bọọlụ bọọlụ bụ cylinder nwere obere dayameta na ogologo buru ibu na-eji nwayọ nwayọ ejizi. A na-eri ihe site na ntinye nke cylinder na ala site na mmetụta nke bọọlụ nchara na ọla na ịkpụcha onwe ya. N'ihi ihe na-eri nri na-aga n'ihu, nrụgide na-eme ka ihe na-aga n'ihu ma na-agbanye ihe onwunwe ala site na mpempe cylinder. A na-atụkwasị grid ahụ arụnyere na ntaneti maka igwe mmanye. Obere pulp elu na cylinder na-ebelata ihe na-egweri ihe, ma gbochie nchara nchara. N'okpuru otu mmepụta ọnọdụ, ikike nke imepụta igwe na-ebu ibu karịa ihe igwe ihe karịrị. Isi abụọ nke ahụ na-arụ ọrụ ahụ na-agbagharị agbagharị kama ịmịpụ na-amị amị, nke na-azọpụta ume.
Ф900 × 1200 36 Ogbe 20 0.074-0.4 0,5-1,5 Ogbe 18.5 4
Ф900 × 3000 36 Ugboro abụọ 20 0.074-0.4 1.5-4.8 30 6
Ф 1200 × 2400 31 3.5 25 0.074-0.4 1.6-5 30 9.5
Ф1830 × 6400 25 21 25 0.074-0.4 6-17 210 38
Ф 2100 × 3000 23 13 25 0.074-0.4 5-15 180 32
Ф 2100 × 3600 23 16 25 0.074-0.4 6-17 210 35.8
Ф 2100 × 4500 23 20 25 0.074-0.4 7-21 245 42.6
Ф 2100 × 7000 23 31 25 0.074-0.4 8-25 280 55
Nke gara aga: Gold ore egweri Wet Pan Mill Machine
Osote: Portabel Alluvial Placer Gold Saa Osisi Trommel Sluice Igbe
Gold Ọla kọpa Ore Stone Ball Ball egweri Mill M ...
1100 1200 Model Gold Wet Pan Mill Machine Na Af ...
1400 1500 1600 Gold Wet Pan Mill Chile Mill F ...
Gold ore egweri Wet Pan Mill Machine
Powder Ime egweri Mill Raymond Mill Machine